Ciidamada Amniga Puntland oo Qarax Fashiliyay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Ciidamada Amniga Puntland oo Qarax Fashiliyay
Ciidamada Amniga Puntland oo Qarax Fashiliyay
Ciidamada amniga Puntland ee gobolka Bari ayaa fashiliyay qarax miino oo la dhigay bartamaha Suuqa Bosaso, halkaasi oo ay ku badan yihiin shacabka iyo baabuurta dadweynaha.
Qarax ayaa la dhigay halka ay iskaga xirmaan wadada weyne ee bartamaha magaaladda marta iyo wadada Suuqa Caanaha. Goobta la dhigay qarax ayaa bar kontorool oo ay ku baaraan dadka iyo gaadiidka u tahay ciidamada amniga magaaladda.
Taliyaha Qaybta booliiska gobolka Bari Gashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud oo Horseedmedia la xiriirtay ayaa sheegay in Ciidamadu heleen qaraxa ka hor intii uusan qarxin.
Wuxuu sheegay in qarax miinow lagu soo qariyay bac, ka dibna la dhigay wadada dhinaceeda oo u dhow goob ay ciidamada Amniga ku baaraan shacabka iyo gaadiid xiliyada habeenkii.
” Halka la dhigay qarax Miinow waa goob dadka iyo gaadiidku aad ugu badan yihiin, waxay xirnay dhammaan meheradihii, dadkiina waanu ka kaxaynay goobta, kadibna waxaanu qarxinay miinadii” ayuu yiri Taliyaha Booliiska gobolka Bari.
Ma jirto cid wax ku noqotay iyo hanti ku burburtay qaraxa miine ee la dhigay goobta.
Muddooyinkii u dambeeyay waxaa ka dhacay magaaladda Bosaso dilal qorshaysan oo lala eeganayay Ciidamada amniga iyo ciidamada dowladda hoose ee Bosaso, waxaa kaloo ka dhacay qaraxyo lala beegsanayay madaxda hay’adaha dowladda ee kala duwan.